Hey’adaha Xuquuqda Aadanaha oo dacwad ku soo oogay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta… – Hagaag.com
Hey’adaha Xuquuqda Aadanaha oo dacwad ku soo oogay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta…
Posted on 21 Nofeembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Hey’adaha Xuquuqda Aadaanaha ayaa dacwad ku soo oogay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid Al-Nahyan intii uu ku gudo jiray booqasho maanta oo arbaco ah uu ku gaaray wadanka Faransiiska.
Waxyaabaha ay ku eedeyeen hey’adaha dhaxal sugahan ayaa waxaa ka mid ah danbiyo dagaal iyo jirdil loo geestay dad maxaabiis oo ka dhacay dalka Yemen.
Dacwadaan ayaa waxaa gudbiyay qareen lagu magacaabo Joseph Breham, kaasi oo matalaya hey’adaha caalamiga ah ee difaaca xuquuqda aadanaha iyo xoriyatul qowlka.
Qareenkan ayaa ku eedeeyay dhaxal sugaha Imaaraadka oo ah taliye ku xigeenka ciidanka qalabka sida in uu mas’uul ka yahay weeraro dad rayid ah lagu laayay oo ka dhacay gudaha Yemen.
Hey’adaha caalamiga ah ee difaaca xuquuqda aadanaha ayaa dhanka kale xaqiijiyay in Mr Nahyan uu lahaa amarka diyaaradaha dalkiisa ay duqeymaha uga fulinayaan wadanka carbeed ee colaada sokeeye la degtay.
Dacwadaan laga gudbiyay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ku saxiixnaa hey’adaha Amnesty, Human Rights iyo Oxfam,waxaana dhamaantood ay dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo soo taago.
Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo qeyb ka ah howlgalada milatari ee ka dhanka ah dagaalyahanada Xuutiyiinta yemen ayaa waxaa bilihii la soo dhaafay la kulmeen dhaleeceyn xoogan.
Dhinaca kale Ku dhowaad 85,000 oo caruur ah ayaa loo badinayaa in ay ku dhinteen sadexdii sano ee la soo dhaafay gaajo iyo haraad tan iyo markii uu dalkaas ka qarxay dagaalka sokeeye ee u dhaxeeya ciidamada dowlada iyo kooxaha mucaaradka hubeysan.
Warbixin ay soo saartay arbacada maanta ah hey’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee Save The Children ayaa waxay ku sheegtay caruur ay ka yartahay da’dooda shan sano ay u dhinteen nafaqo daro.
Hey’adaha gargaarka ayaa xaqiijiyay in 84,701 oo caruur ah ay gaajo ugu dhinteen bishii April sanadkii 2015- ilaa October sanadkan aynu ku gudo Jirno ee 2018-ka sababo la xiriira cunto la,aan.